राप्ती पारीको जनस्तर उठाउन मेरो उम्मेदवारी | Indrenionline.com
लुमाकान्त न्यौपाने ‘सागर’
अध्यक्षका उम्मेदवार, नेकपा माओवादी केन्द्र गढवा गाउँपालिका
गढवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा तपाईको उम्मेदवारी किन ?
हामीले शोषित उत्पीडितको अधिकारका लागि निकै ठूला लडाई लडेका छौं । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ । यसको जन्मदाता नै माओवादी हो । अहिले हाम्रो एजेण्डामा समग्र मुलुक अघि बढिरहेको छ । हिजो स्थानीय तहको कुरा उठाउँदा हामीलाई आतंककारी देख्ने साथीहरु अहिले स्वयं प्रतिस्पर्धामा आउनुभएको छ । यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो विजयी भइसकेको छ । जसको नेतृत्व उसको नेतृत्व हुन आवश्यक छ ।
नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरिपक्षता, समावेशी समानुपातिक र उत्पीडितको अधिकारको नीति माओवादीले लिएको हो । अहिले ती प्राप्त भएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि माओवादीको नेतृत्व आवश्यक छ । अन्य पार्टीको नेतृत्वले यसको वास्तविक मर्म कुनै पनि हालतमा बुझ्न सक्दैन । त्यसैगरी गढवा गाउँपालिकाको समग्र विकास र यहाँको दैनिक प्रशासन सहज बनाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी परेको हो । यस क्षेत्रको विकास निर्माण र यहाँका जनताको जीवनस्तर बढाउनका लागि मेरो उम्मेदवारी परेको हो ।
मतदाताले तपाईलाई नै मत दिनुपर्ने कारण के ?
नेपालमा परिवर्तनका लागि उठेको लडाईमा मैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरको छु । कुनै बच्चाको जन्मजातलाई जत्ति चिन्ता अरुलाई हुँदैन । स्थानीय तहको माया पनि हामीलाई जति अरु दललाई छैन । अन्य उम्मेदवार विजयी भए पनि स्थानीय तहको वास्तविक अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्दैनन् । हामीले लिएको एजेण्डा भएका कारण यसको प्रयोग पनि हामीले मात्र गर्न सक्छौं ।
स्थानीय तहको अधिकार २२ ओटा छन् । ती अधिकार प्रयोग गर्न सकेमा हामीले गाउँलाई नयाँ ढंगले विकास गर्न सक्छौं । त्यसका लागि सबै कुरा बुझेको उम्मेदवार आवश्यक पर्छ । यी सबै काम गर्न म अन्य उम्मेदवारको तुलनामा सक्षम भएकाले आम मतदातालाई मलाई विजयी गराउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
गढवा गाउँपालिकाको समस्या के देख्नुहुन्छ ?
गढवा गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी, मुक्तकमैया र ऐलानी जग्गाको समस्या छ । यसका कारण यस क्षेत्रका धेरै गरिब समुदायलाई अप्ठ्यारो परेको छ । त्यसैगरी राप्ती नदी र अन्य खहरे खोलाका कारण जग्गा कटानको समस्या छ । अहिले वर्षेनी सयौं विघा खेतीयोग्य जमिन नास भइरहेको छ । त्यसैगरी सडक, खानेपानी, बिजुली र सिचाईको समस्या छ । साथै अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारको पनि निकै समस्या रहेको छ । गढवामा रहेका सडकहरु निकै जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । यस गाउँपालिकाअन्तर्गत नाका क्षेत्र जोडिएका स्थानमा खानेपानीको निकै अभाव भएको छ । त्यसैगरी यातायातको पनि निकै धेरै समस्या छ । यी समस्या समाधानका लागि मसँग स्पष्ट गुरुयोजना छ । गढवामा हामीले कृषि तथा पर्यटनको राम्रो विकास गरेर यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्छौं ।